माननीय प्रदेशसभा सदस्य ज्यूहरु !
अहिले मुलुकका सातै प्रदेशसभामा पूर्व बजेटमाथिको छलफल जारी छ । माननीय ज्यूहरुले धेरै विकास निर्माण सम्बन्धि मुद्दा टेबल गरिसकेको अवस्था छ । तर ‘उज्यालो दिने बत्तिमुनिको अध्यारो’ भनेझै हामी श्रमजीवी पत्रकारको मुद्धा उठेको कतैपनि सुनिएन् । यो पत्र मार्फत ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु ।
दुनियालाई थाहा छ, लोकतन्त्रको मुख्य गहना मानव अधिकारको सम्मान र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हो । सुशासन हो । तर यो तबसम्म यो कार्य सफल हुन सक्दैन जबसम्म देशमा व्यावसायिक र निर्भीक पत्रकारिताको विकास हुदैन । पत्रकाहरू आर्थिक र भौतिक रुपले असुरक्षित भएसम्म पारदर्शी, जनअनूकल र सुशासन कायम हुन सक्दैन । पटक–पटकका आन्दोलन र घटनाले पत्रकारिता जगतको भूमिका प्रमाणित गरिदिएको माननीय ज्यूहरुलाई अवगत नै छ । सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरू भोकै छन् । न उचित पारिश्रमिक न त समयमै तलब । यसले श्रमजीवीको परिवार चलाउन धौ–धौ छ । यस्तो अवस्थामा उसले दिने सूचना र कार्यक्षमता निकै कमजोर हुन्छ । पत्रकार भनेपछि सबैले ‘युज एण्ड थ्रो’ गर्ने चलन छ । नेपालमा पत्रकारलाई बैक र बित्तीय संस्थाले पत्याउँदैनन् । सम्पत्ति भएर रहरले लागेकाको हकमा त ठिकै होला । तर, जीवन नै पत्रकारितामा होमिरहेका सक्रिय श्रमीजवीको त उपचार गराउने बेलामा चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था पत्रकारले ल्याएको त होइन ।
हामीले लोकतन्त्र ल्यायौ तर खै विधिको शासन कानूनी राज्य ल्याउनै सकेनौ माननीय ज्यू । मजदूर र कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण सुविधा पाउँछन् । तर, पत्रकारहरू जिल्लै छन । देखाउनका लागि श्रमजीवी ऐन छ, तर सबै मिडियामा कार्यान्वयन भएको छैन । खाइनखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकारहरु आफ्ना समस्याबारे किन यति निरिह र श्रम शोषण भोगी रहेका छन् यो बुझनै सकिएको छैन् । नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडिया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक,ठेकेदारलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेका छन । मालिक झन झन धनी भैरहेपछि उनीहरुको संस्था भने झन झन कमजोर भैरहेको देखाईन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलव दिन आनाकानी गरिन्छ । पत्रकाहरु शैक्षिक मगन्ते बन्न वाध्य भैरहेका छन् ।
मागी र ठगी खान सक्नेकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रिय श्रमजीवीको दुखको बयान गरी साध्य छैन । माननीय ज्यू अहिले कानून निर्माणको बेला स्थानीय स्तरमा यो मुद्धाहल गर्न के–के पहल गर्न सकिन्छ ? पत्रकारिता जगतको संस्थागत विकासका लागि के कस्ता कार्य थाल्ने हो डायरीमा टिप्नु पर्यो ?
मिडिया मैत्री नीतिकालागि केही सुझावः
— सक्रिय श्रमजीवी पत्रकाहरुलाई अधिकार दिलाउने नीति बन्नुपर्छ । पत्रकार लगायत मिडियामाथि हुने सबै खाले भौतिक आक्रमणको नियन्त्रणका लागि राज्य सजग हुनुपर्ने ।
— पत्रकाहरुलाई अनिवार्य नियुक्ती पत्र र तोकिएका सुविधाहरु दिलाउन श्रमजीवी ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत न्यूनत तलब तोकेर मात्र पुग्दैन,अनुगमन गरेर पारिश्रमिक नदिने संचारगृहलाई कारावाही गराउने नीति आवश्यक पर्छ । पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक नदिने संचार गृहहरुलाई सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउनु हुदैन । स्वायत्त र शक्त्तिशाली सक्रिय श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्दछ । ताकि यो समितिले पारिश्रमिक नदिने संचार संस्थाहरुको सूची बनाउने श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकोस् ।
— यसैगरि स्थानीय संचार माध्यमलाई बलियो र आर्थिकरुपले सवल बनाउन स्थानिय तहमा संचालन भएका मिडियाहरुको वर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनिहरुलाई स्थानिय तहबाटै विज्ञापन दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसकालागि प्रदेशमै विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरेर समानुपातिक रुपले विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
— कार्यरत पत्रकारको सुरक्षाकालागि संचार गृहलाई वाध्य पारिनुपर्छ । जस्तो, बीमा गर्ने, संञ्चय कोष, उपचार र अन्य भैपरीखर्च दिने आदि व्यवस्था हुनुपर्छ । पत्रकारहरुलाई रात विरात आवत गर्ने, चिया खाजाको र संचार उपकरण र रिर्पोटिंग खर्च दिने प्रबन्ध संचार संस्था मार्फत गरिनुपर्दछ । अर्कोतिर राती अबेरसम्म काम गर्ने पत्रकारको आवासको व्यवस्था मिलाउने र महिला पत्रकारहरुलाई पूर्ण सुरक्षा दिने काम गर्न आवश्यक छ । — स्थानीय तहमा संचालन भएका मिडियाहरुको वर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनीहरुलाई स्थानीय तहबाटै विज्ञापन प्राधिकरण मार्फत विज्ञापन दिलाउने नीति जरुरी छ ।
— १ नम्बर प्रदेश सरकारले योगदानका आधारमा जेष्ठ र सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित सम्मान गर्नुपर्दछ । जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरुप मासिक पेन्सन र बिलख बन्दमा परको पत्रकार र उनीहरुको परिवारलाई उचित र नियमित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
—पत्रकारको भैपरी आउने खर्च व्यवस्थानकालागि सरकारले ‘सिड मनी’ दिएर कर छुटमा सहकारी संचालन गराउनुपर्दछ ।
— सरकारले सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारका लागि सबै सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार सुविधा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
— निशुल्क संचार सुविधाको व्यवस्था उपलव्ध गराउनुपर्छ ( फोन, मोवाइल, ईन्टरनेट आदि)
— आदिवासी, दलित र महिला पत्रकारहरुलाई मुलधारमा ल्याउन विशेष समावेशी नीति बनाउनुपर्छ । यसबारे स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट बिशेष पहल हुनु जरुरी छ ।
— श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि (थप अध्ययन, तालिम) का लागि राज्य सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरुका लागि क्यामेरा,ल्पापटप, मोटरसाइकल लगायतका संचार उपकरणको खरिदमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र अन्तमा प्रदेश सरकारको आफ्नै मिडिया आयोग वा काउन्सिल हुनुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमन नियमन र कार्बाही गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
—श्रमजीवी पत्रकारका लागि विना धितो न्यून व्याजदरमा घर निर्माण गर्न वा संचारगृह संचालन गर्न ऋण उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।
— जथाभावी पत्रकार बन्ने र बिना पूर्वाधार मिडिया खोलेर झन बेरोजगारी समस्या थप्ने कार्य बन्द गराउनुपर्छ । शिक्षित र जिम्मेवार पत्रकार र पत्रकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसकालागि आमसंचार प्रतिष्ठिान मार्फत पत्रकारलाई बिशेष परीक्षा दिने, रिफ्रेस तालिम संचालन गर्ने गरिनुपर्छ ।
नमस्कार ! श्रमजीवी पत्रकार गणेश लम्साल — विराटनगर (मोरङ), १ नम्बर प्रदेश
प्रकाशित २१ जेठ २0७५ , सोमवार | 2018-06-04 04:16:56